Calooshood u shaqeystayaasha Ruushka: “Xaftar lacagtuu bixin waayay ama taladuu ka qeybgelin waayay” – Radio Damal
Waxaa janaraal Khaliifa Xaftar saameyn ku yeeshay boqolaal ka tirsan calooshood u shaqeysatayaasha Ruushka ah ee ka garab dagaallamayay ciidamadiisa oo isaga baxay aagga dagaalka ee koonfurta Tripoli, sida ay wakaaladda wararka ee AFP ka soo xigatay xooggaga dowladda ay Qaramada Midoobay taageersan tahay.
Bixitaanka dagaal-yahannadaasi ayaa ku soo beegmaysa xilli Jananka ay guuldarooyin waaweyn ka soo gaareen duullaanka mudada sanadka ah uu ku doonayay inuu ku qabsado caasimadda Liibya ee Tripoli ee fadhiga u ah dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee dalkaas.
Axmed Tiir oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo caalamka Islaamka ayaa BBC u sheegay in sababta ay u baxeen calooshood u shaqeystayaasha Ruushka ay noqon karto “in Janaraal Xaftar uusan siin lacagihii uu u ballan qaaday iyo in uu ka qeybgelin waayay go’aannada ku saabsan dagaalka.”
“Labo sabab bey u baxeen, lacagihii loo ballan qaaday oo aan Xaftar siin taana waxay keentay in ay isku dacaan. Waxay ahaayeen dad lacag doon ah, lacagtii sidii la rabay haddii loo bixin waayay dhib ayaa ka imaanayo oo iyaga markaas waxay meesha u sii joogaan ma lahan; midda labaad, wuxuu diiday Xaftar inuu ka qeyb geliyo siyaasadaha kore ee dagaalka oo isaga ayaa go’aamada idil gaarayay”, ayuu yiri Axmed Tiir.
Wuxuu sidoo kale sheegay in ciidammadan markii hore uu soo kireystay Janaraal Khaliifa Xaftar si ay uga caawiyaan dib u qabsashada magaalada caasimadda ee Tripoli, tallaabadaas oo aanan suurogelin.
“Xaftar siyaasad ahaan waa u dhamaatay sida aan filayo… waayo awood ciidan ayuu rabay in uu wax ku helo tiina wey suurageli weysay,” ayuu yiri Axmed Tiir.
Mareykanka iyo Ruushka
Militariga Mareykanka waxay ku eedeeyeen Ruushka in diyaarad dagaal uu u diraya Liibiya si ay taageero ugu fidiyaan calooshood u shaqeystayaasha Ruushka ee ka howlgala Liibiya.
Illaa iyo hadda wasaaradda gaashaandhigga Ruushka kama aysan hadlin eedeymaha ka soo baxay taliska ciidammada Mareykanka ee fadhigeedu yahay Afrika.
Horraantii bishan ayay aheyd markii warbixin la soo dusiyay oo ay qortay Qarmada Midoobey lagu muujineyay in calooshood u shaqeystayaal Ruush ah ay ka howlgalaan Liibiya kuwaas oo taageero u fidinayay ciidammada Janaraal Khaliifa Xaftar.
Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov ayaa Talaadadii telefoon kula hadlay Aguila Saleh Cisa oo ah nin ka agdhaw Janaraal Khaliifa Xaftar, waxayna ka wada hadleen xaaladda Liibiya.
Wasiirka wuxuu Aguila Saleh Cisa oo ah guddoomiyaha baarlamaanka, u sheegay in loo baahan yahay in heshiis xabad joojin ah oo degdeg ah isla markaana dhammaan dhinacyada isku haya colaadda Liibiya laga qeybgeliyo heshiiska.
Maxaa Liibiya loogu soo celin la’yahay kala dambeynta?
Ruushka weli kama uusan hadlin in Liibiya ay joogaan calooshood u shaqeystayaasha, waxaa jiro wararka ah in ciidammo ka tirsan shirkadda Wagner oo ay hoostagaan calooshood u shaqeystayaasha ay sidoo kale ka howlgalaan Suuriya, Bariga Ukraine iyo dalal kale oo ay dagaallo ka taagan yihiin sida Jamhuuriyada Bartamaha Afrika.
Dowladda Ruushka waxay beenisay in wax xiriir ah ay la leedahay maleeshiyaadkaas.
Bayaanka ka soo baxay taliska ciidammada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay: “Xukuumadda Moscow waxay dhawaan diyaarado militari u dirtay Liibiya si ay u taageeraan calooshood u shaqeystayaal ka tirsan shirkad bixisay qanddaraasyada militariga oo ay dowladda taageerto oo ka howlgasha Liibiya”.
18-kii bishan May, ciidammo taabacsan dowladda ay Qaramada Midoobey ictiraafsan tahay ee Liibiya waxay qabsadeen saldhigga ciidammada cirka ee ku yaalla koonfurta magaalada caasimadda ee Liibiya.
Sida laga soo xigtay ciidammada dowladda ee GNA, in ka badan 1,000 ka mid ah calooshood u shaqeystayaasha Ruushka waxay isaga baxeen koonfurta Tripoli waxaana lagu qaaday diyaarado Ruush ah kaddib markii ay dib u riixeen ciidammada dowladda.
Ruushka iyo Janaraal Khaliifa Xaftar ma aysan xaqiijin bixitaanka calooshood u shaqeystayaasha Ruushka u dhashay.